Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka oo loo hanjabay iyo codsi ay u dirsadeen beesha caalamka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka oo loo hanjabay iyo codsi ay u dirsadeen beesha caalamka
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashada dalka ee dhawaan laalay 11-kursi oo ka tirsan Aqalka hoose ee baarlamaanka cusub Soomaaliya, ayaa beesha caalamka gaarsiiyay war cusub oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo dhibaatooyinka cusub ee soo wajahay.
Guddigaan ayaa keenay xaalad siyaasadeed oo cakiran iyo diidmo ay kala hor yimaadeen guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed, kuwaas oo si wadajir ah war-saxaafadeed uga soo saaray go’aankii ay guddigaasi ku laaleen 11-ka kursi.
Guddoomiyaha guddiga C/risaaq Jaamac Barre iyo xubnihiisa ayaa beesha caalamka gaarsiiyay xaalad so wajahday, iyagoo sheegay ammaankooda uu halis ku jiro oo ay hanjabaadyo iyo cabsi gelin lagula kacay, waxayna codsadeen in ammaankooda la sugo, taasoo beesha caalamka ay ka aqbashay.
C/risaaq Jaamac Barre ayaa sidoo kale beesha caalamka ka dalbaday in loo kordhiyo mushaaraadka iyo kharashaadka kale ee la siiyo, maadaama kharashaadka ku baxaayo ay aad u badan yihiin.
Beesha caalamka ayaa sheegtay arrinta mushaar kordhinta ay quseeyso guddiga doorashooyinka heer federaal, maadaama aysan lacagta guddiyadu bixin UN-ka ee laga bixinaayo khidmooyinka laga qaado musharixiinta.
“Ammaankeenna qatar ayuu ku jiraa, mana helno wax mushaaraad ah, waxaan nalagu leeyahay kharashka hoteelka aynu degannahay” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha guddiga xallinta khilaafadka doorashooyinka C/risaaq Jaamac Barre Jaamac.
Dhinaca kale, warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in albaabadda loo laabay xafiiska ay guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka ku lahaayeen magaalada Muqdisho, iyadoo madaxda iyo howl-wadeenada guddigaasi maanta ka ambabixi doonaan magaalada Muqdisho.
Madaxda guddigaasi oo badankooda qurbo-joog ahaa ayaa la sheegayaa inay sababo dhinaca amniga ah ay uga amba-baxayaan magaalada Muqdisho, iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka ay guddigaasi ku wajahan yihiin, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ku wajahan yihiin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii gudiga xalinta khilaafaadka uu soo saaray war-saxaafadeed ay ku laaleen 11-kursi oo ka mid ah xubnaha lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyadda dalka, taas oo jah-wareer weyn ka dhex dhalisay guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed.